Mahadum dị iche iche »Mahadum Hodges
Plọ ahịa Hawks Gear
Plọ ahịa Amazon Smile
Nzere na nyocha Asambodo Mmemme
Asambodo gụsịrị akwụkwọ
Gtọ asụsụ Bekee
Ịmụta ihe niile
Ihe ntinye aha
Ụmụ akwụkwọ Mba
Calculator Ntaneti efu
Studentsmụ akwụkwọ ndị agha
Di iche iche
Nzuzo Nzuzo Mgbasa Ozi
Mahadum Hodges na-eduzi ụzọ dị iche iche na agụmakwụkwọ ka elu
Di iche iche bu uzo ndu na Hodges, ebe ihe omuma nke di iche-iche bu ihe siri ike. A na-ewusi mahadum anyị ike ma na-enye ike site na iche iche, ọdịbendị ọdịbendị nke ụmụ akwụkwọ, ngalaba, na ndị ọrụ na-eweta ọtụtụ olu na echiche dị iche iche na mbọ anyị na-agba. Anyị na-asọpụrụ ma jiri akpọrọ ihe nke ndị sitere na agbụrụ niile, agbụrụ agbụrụ, afọ, okike, okpukperechi, mmekọrịta nwoke na nwanyị, nkwarụ, ọnọdụ akụ na ụba ma ọ bụ nke ochie, na echiche dịgasị iche iche na ndịiche dị iche iche, anyị na-ejikwa echiche dịgasị iche iche akpọrọ ihe. Anyị na-etinye aka na ndidi, uche, nghọta, na nkwanye ùgwù n'ebe niile n'etiti obodo anyị, anyị na-ekwenyekwa nkwa anyị iji nye ebe nnabata maka mmadụ niile.
Akpọrọ Mahadum Hodges aha Onye Ndu Di iche na Nsonye nke forlọ Ọrụ Maka Asambodo Diversity.
# 3 estlọ akwụkwọ kọleji kachasị nchebe na Florida
Akpọrọ aha na kọleji kacha dị iche iche na Niche na Florida
Adị m njikere itinye ugbu a!
Nyochaa Mmemme Anyị
Di iche na ndu
Gini mere di iche-iche ji di nkpa na ulo akwukwo?
Onye ọ bụla n’ime anyị na-abịa kọleji ma ọ bụ mahadum nke aka anyị nwere ahụmịhe nke anyị nke na-akpụzi ụzọ anyị si ahụ ụwa. Dika anyi n’abalite izute ndi mmadu ohuru n’ime umu akwukwo ibe anyi ma sorokwa ha na-amuta ihe, anyi na-amalite ihu na ihe anyi nwetara bu nke a.
Iji uche mepere emepe, anyị na-amụta etu ahụmịhe nke ndị ọzọ si eweta echiche ọhụụ ọhụụ na ọhụụ anyị na otu anyị si ahụ ụwa. Imeghe uche anyị ịghọta nsonye, ​​agbụrụ, agbụrụ na okike dị iche iche, ọnọdụ ndị agha ochie, esemokwu okpukpe, afọ, na ọnọdụ akụ na ụba na-eme ka anyị bụrụ ndị mmadụ. Ka ị na-aga na ndị ọrụ na nke ọhụrụ a, ị ga-eme ka asọmpi akụ na ụba America.
Mahadum Hodges na-elekwasị anya na iwuli akwa mmiri na obodo buru ibu ma soro ndị otu na-eme ka elebara anya na ahụmịhe nke iche iche na nsonye kacha mma site na itinye aka na obodo. N'ikwu okwu banyere elekwasị anya, Hodges na-enye kalenda nke mmemme dịgasị iche iche maka ụmụ akwụkwọ kọleji na ndị otu obodo. Ghọta na-eme ka anyị bụrụ onye ọ bụla dị iche na iche, hụ ọdịbendị dị iche iche, ị ga-etolite ma bụrụ onye na-anabata esemokwu ndị ọzọ n'ihu ọha. Ọnọdụ ọhụrụ a ga - enyere gị aka ịme ka nghọta gị banyere ndị ọzọ sikwuo ike n'ebe ọrụ.
Kedu ka Hodges si nabata ndị iche?
Hodges U nabatara ụdị dị iche iche n'ọtụtụ ụzọ.
Kedu? Site n'idozi nsogbu ndị na-abịa na mgbanwe ọnụọgụgụ anyị na-agbanwe agbanwe, echiche dị iche iche, na izi ezi ebe ọrụ. Hodges lebara ihe ịma aka ndị a anya site na itinye uche na nsonye, ​​ikike omenala, na ịha nhatanha. N'ụzọ nke a, Mahadum na-arụ ọrụ iji mepụta ọdịbendị bara ụba ma na-eme nri site n'aka ụmụ akwụkwọ dị iche iche. Di iche iche a na enyere ndi umu akwukwo aka ike na ha nwere ike iweta onwe ha imuta na itolite.
Gịnị Mere I Ji Kwesị Em nakwere Ndịrịta Iche?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịrụ ọrụ nlekọta, ma ọ bụ ọbụna na otu, ọ dị gị mkpa ịnakwere gburugburu ebe dị iche iche maka ihe ịga nke ọma gị. Hodges mụtara na ndị nlekọta nke oge a ga-enwerịrị ikike nke omenaala na agbụrụ agbụrụ, otu ụdị ọrụ a na-enyekwa gị ohere ịbụ onye otu na-arụpụta ihe. A ga-achọ ka ị nweta ọrụ maka imepụta oke na nsonye maka niile n'ọtụtụ ebe ọrụ.
Mkpa a ị nwere ike ịrụ ọrụ na otu agbụrụ na agbụrụ dị iche iche bụ ihe na-akpata Hodges nraranye iji mepụta gburugburu ebe dị iche iche. Ihe niile anyị na-eme bụ maka ime ka ụmụ akwụkwọ anyị nwee ihe ịga nke ọma, na nhọrọ anyị ịnye ọnọdụ mmụta dị iche bụ ihe akaebe nke ntinye anyị na ụzọ ịga nke ọma gị.
Obodo Mahadum Hodges
Ọnụ ọgụgụ Di iche iche nke Hodges
Mahadum Hodges na-anabata ụmụ akwụkwọ si agbụrụ niile, agbụrụ, afọ, okike, okpukperechi, mmekọrịta nwoke na nwanyị, nkwarụ, ọnọdụ akụ na ụba ma ọ bụ nke ochie, yana echiche dịgasị iche iche na esemokwu onye ọ bụla. Anyị na-agba onye ọ bụla na-amụrụ ihe ume ikwu okwu ma kụziere ndị ọzọ banyere ahụmịhe ha dịgasị iche iche iji mepụta ihu igwe mmụta nke ihe omuma maka mmadụ niile.
Anyị na-agba mbọ na-eke a iche iche campus maka ụmụ akwụkwọ niile na-ahụ ihe ịga nke ọma. N'okpuru ebe a bụ ọnụ ọgụgụ maka Mahadum Hodges.
Ndebanye aha nwoke na nwanyị
Ndebanye aha agbụrụ na agbụrụ
Asụsụ Spanish: 44%
African America: 12%
White, Ndị na-abụghị Hispanic: 38%
Ọzọ, Mixed, or Unknown: 6%
Studentsmụ akwụkwọ pere mpe na agbụrụ dị iche iche maka Mahadum Hodges bụ 62%. Nke a dị iche na-eme ka anyị bụrụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị iche iche dị na Florida. A kpọwo anyị aha dị ka ụlọ ọrụ kachasị elu nke Hispaniki. Comingghọ mahadum kachasị iche na Florida bụ ihe ịma aka anyị nabatara, n'ihi na ị na-achọ ịnye ụmụ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị iche iche - anyị na-achọ ịmepụta ụwa ka mma maka anyị niile.
Kpọtụrụ Hodges U Banyere Di iche
Anyị na-anabata ajụjụ gị gbasara Di iche iche na Nsonye ma na kọleji ma n'ime obodo. Biko kpọtụrụ anyị na:
Office nke Di iche iche, Nsonye na Omenala Cultural
4501 Colonial Boulevard, Owuwu H
Uzoigwe, FL 33966
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki iji mee ka ahụmịhe gị dịkwuo ike mgbe ị na-ebugharị na ebe nrụọrụ weebụ. Site na kuki ndị a, kuki ndị a na-ahazi dị ka ndị dị mkpa na echekwara na ihe nchọgharị gị ka ha dị oke mkpa maka ọrụ nke arụmọrụ nke weebụsaịtị. Anyị na-ejikwa kuki ndị ọzọ na-enyere anyị aka nyochaa ma ghọta otú i si eji weebụ a. A ga-echekwa kuki ndị a na ihe nchọgharị gị naanị na nkwenye gị. Ị nwekwara nhọrọ ịpụ na kuki ndị a. Ma ịpụ na ụfọdụ kuki ndị a nwere ike inwe mmetụta na ahụmịhe nchọgharị gị.